Global Voices teny Malagasy » Bangladesh: Fahafatesana Mahatsiravina Niteraka Fanarahamaso akaiky ny an-dalambe · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Aogositra 2011 18:19 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsimo, Bangladesh, Fitantanam-pitondrana, Media sy Fanoratan-gazety, Sarimihetsika, Tsidika, Voina
Nanjary fandrika mamono ho an'ireo mpivezivezy marobe noho ny antony maro samihafa ireo lalambem-pirenena migodana mirefy 3.492 kilometatra sy ireo lalambem-paritra mirefy 4.269 kilometatra ao Bangladesh. Ireo antontan'isa dia maneho fa  isan-taona dia eo amin'ny 4.000 eo ho eo no olona maty anatinà lozam-pifamoivoizana tamin'ny loza 20.000 eo manerana ny firenena.
Tohina ny firenena iray manontolo tamin'ny nandrenesana ny nahafatesan'ny roa tamin'ireo zanakalahiny isan'ny sangany, ilay tale nahazo loka taminà famokarana sarimihetsika Tareque Masud  sy ilay mpaka sary (cameraman) fanta-daza maneran-tany sady mpanao gazety amin'ny fahitalavitra Ashfaque Munier Mishuk . Maty tanaty lozam-pifamoivoizana mahatsiravina izy ireo tamin'ny 13 Aogositra 2011, rehefa hiverina ho ao Dhaka renivohitra, avy any Manikganj, tao amin'ny lalamben'i Dhaka-Aricha rehefa nifandona mafy tamin'ny minibus nentin-dry zareo ny fiabe mpitatitra olona iray ka nanapitika azy ireo, ankoatry ny fahafatesan'olona dimy teo noho eo sy naharatràna olona marobe. Catherine Masud, teratany Amerikana vadin'i Tareque koa dia naratra mafy tamin'ilay loza.
Nisaona ny fahafatesan'izy roa ireo ny mponin'ny aterineto nanomboka teo. Sahidul Alam no nilaza voalohany ny vaovao  [niaty sary vitsivitsy ilay lahatsoratra, ireo korontana sisa tavela sy ny fisaonan'ny olona]:
Nandao ry Tareque Masud, iray amin'ireo matihanina amin'ny mpamokatra sarimihetsika novokarin'ity firenena ity ; Mishuk Munier , mpaka sary manan-talenta sady matihanina amin'ny resaka media izay samy nanana ny nofinofy sy ny fahafahana manova ny fomba fitateram-baovao, maty taminà fahafatesana tampoka be raha iny ry zareo hiverina ho any Dhaka iny avy nifidy ny toerana hanatontosany ny sarimihetsika manaraka .
Ny horonantsary lava novokarin'i Tareque Masud voalohany, Matir Moina  (Ilay Vorona Tanimanga) dia nahazo ny Loka Iraisam-pirenena International Critic's Award nandritra ny Festival Cannes 2002. Io no voalohany indrindra tamin'ny sarimihetsika Bangladeshi niodina be indrindra eran'izao tontolo izao.
Ashfaque (Mishuk) Munier, Filoha Tale Jeneralin'ny ATN News , dia nanomboka niasa tamin'ny maha mpampianatra ny asa fanaovana gazety azy tao amin'ny Anjerimanontolon'i Dhaka ary teo aloha dia niasa ho an'ny fampahalalam-baovo iraisam-pirenena toy ny BBC World, Discovery Channel, National Geographic sy ny the Real News . Mpaka sary fanta-daza ihany koa izy ary niasa tamin'ny ankabeazan'ireo sarimihetsika novokarin'i Tareque Masud.
Shahnaz ao amin'ny Dhaka Dweller dia manoritsoritra  ny endrika ratsin'ireo lalambe Bangladeshi :…..
Amin'ireo zavatr tena manorisory be ahy eto Bangladesh, ny tsy fahampian'ny fiarovana eny amin'ireo làlana no ery akaikin'ny tendronny lisitra ery. Ny làlana tsy zarizary, fiara godraka, mpamily tsy ampy fahalalàna sy ny tsy fahaiza-manamory fiara no mahatonga ny arabentsika ho fandrika mamono – na eny an-tanàn-dehibe io na eny amin'ireo lalambe. Tsy misy andro iray tsy andrenesantsika lozam-pifamoivoizana namoizana aina maro. Ary mbola loza be aza mandritra ny fotoanan'ny ‘mousson’, rehefa manampy trotrka ny olana misy ny orambe mivatravatra.
Am-panajana tokoa no ilazan'ireo mpitarika antsika ara-politika hoe tohina noho ny loza, mivavaka ho an'ny fanahin'ny maty sy maneho fiaraha-miory amin'ny fianakaviana tran'ny manjo. Dia miala any ny fampanantenana poak'aty hoe hanafay ny tompon'antoka (vitan'ireo mpamily fiara fitaterana sy kamiao hatrany ny manjavona sy mandositra ireo sampana mpampihatra lalàna). Matetika no natsangana ny kaomity mpanadihady mba hanadihady ny amin'ireny loza ireny. Tsy mbola nandre izay tatitr'izany kaomity izany ny vahoaka, ary misalasala aho hoe ny governemanta ve no mba handinika izay toro-marika fampahatsiahivana entin'izy ireny – raha nisy marina naroso.
Asif Anwar mihevitra  fa ireo hazo eny an-tsisin-dàlana manakana ny fahafaha-mitsinjon'ireo fiara rehefa làla-miolaka no mety ho antony iray mampiakatra ny isan'ny loza ao Bangladesh.
Na izany aza, lahatsoratra iray vao haingana tao amin'ny Daily Star no mamoitra fa  ny fandikàna lalàna no làlana misy eny amin'ireo lalambe migodàna. Ary ireo mpandika lalàna tsy mijanona akory noho ny fanalefahan-tsazy – ny mpamily iray nahafaty olona teny an-dalambe dia hisazy fidirana am-ponja mandritra ny 5 taona monja.
Faruk Wasif dia mampiseho ny hatezerany  [bn] manoloana ny tsy fisian'ny fiarovana eny an-dalambe sy ny tavozavozan'ny manampahefana:
Mandrisika ny fisian'ny loza ireo làlambe migodàna. Mora idiran-doza ireo fiara, ny mpamily tsy mitandrina. Tsy misy taitra ny olona, tsy misy fepetra raisina, tsy misy lalàna. [..] Maty ny olona, saingy tsy misy tompon'andraikitra. Sempotramitsetsitra ny firenena ireo mpifehy. Tsy mivaky loha ry zareo.
Alentiny lalindalina kokoa ny fantsika:
Tsy misy zavatra mijoro tsara eto amin'ity firenena voaozona ity. Vitsy ny olona afaka mamita hatramin'ny farany ny diany alohan'ny hakàn-drafahafatesana azy ireo. Ny làlana mankamin'ny fandrosoana dia feno sakantsakana maro. Voaozona hitanty fahasorenana, fanjakan'i Baroa, losa, fisainana hamono tna ary harerahana isika. Na ny fitokisantsika ny tenantsika aza dia mihozongozona. Miandry isika eto am-pandevenana ny fanantenana.
Ilay mpanao sariitatra sady bilaogera , Sujan Chowdhury, dia mametraka fanontaniana tokana monja – “Mbola hisy firy?” :
Mbola hisy firy? Sary avy amin'ilay mpanao sariitatra sady bilaogera, Sujan Chowdhury.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/08/16/21148/
 maneho fa: http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=198551
 no nilaza voalohany ny vaovao: http://www.shahidulnews.com/2011/08/drik-mourns/
 matihanina amin'ny mpamokatra sarimihetsika novokarin'ity firenena ity: http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=198565
 raha iny ry zareo hiverina ho any Dhaka iny avy nifidy ny toerana hanatontosany ny sarimihetsika manaraka: http://www.thedailystar.net/newDesign/latest_news.php?nid=31498
 dia manoritsoritra: http://dhakadweller.blogspot.com/2011/08/highway-to-death.html
 dia mampiseho ny hatezerany: http://unmochon.com/node/719
 dia mametraka fanontaniana tokana monja – “Mbola hisy firy?”: http://www.sachalayatan.com/node/40573